Huawei Nova 2S ၏ပထမပုံရိပ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
Huawei Nova 2S ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်သည်
Huaweiအစအ ဦး ၌ high-end ထက်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာ ... ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရောင်းအားအများဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး ယခုတွင်၎င်းသည်အရာအားလုံးထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်တို့အား high-end terminal များတွင်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုဖော်ပြရန်အာရုံစိုက်သည် ၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်း၎င်းအပိုင်းသည်လုံးဝမကောင်းပါ။
ဒီအချိန်, Huawei သည်ကျော်ကြားသော Nova စီးရီးအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကို Huawei Nova 2S ဟုခေါ်သည်ပရီမီယံ terminal ကိုခံထိုက်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကြီးမားသောအရာများကိုကတိပေးသော high-end ။ ဒီစမတ်ဖုန်းအကြောင်းပိုသိချင်လား။ ကောင်းပြီ၊ ဆက်ဖတ်နေ ...
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သောယိုစိမ့်မှုများနှင့် Huawei Nova 2S ၏ဒီဇိုင်းသည်မည်သို့သောပုံစံဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်ရုပ်ပုံများအရ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အပြိုင်အဆိုင်များသောအပြိုင်အဆိုင်များသော high-end terminal ကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
ဒီမိုဘိုင်း Huawei Mate 10: The Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူလာမည်, အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ DynamIQ နည်းပညာနှင့်အတူ Processor ကို ဉာဏ်ရည်တု. ထို့အပြင်၎င်းသည် 6GB RAM နှင့်အတူလိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာကြီးမားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေ၊
1 Huawei Nova 2S ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ
1.1 Andoid 8.0 Oreo သည် Huawei Nova 2S ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
2 Huawei Nova 2S ကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်
Huawei Nova 2S ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ
ငါတို့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း Nova 2S တွင် 18:9မျက်နှာပြင် resolution resolution ရှိသည်။ ဒီ caliber ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်ဘုံနှင့်လက်ရှိဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခု။
မျက်နှာပြင် ၆ လက်မ FullHD + ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် အောက်မှာ လက်ဗွေဖတ်တဲ့သူကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
လည်း ကျနော်တို့ကသော့ဖွင့်ဖို့မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု system ကိုသုံးနိုင်သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျောဘက်မှာတော့ 20 နှင့် 16 megapixels ရှိတဲ့ dual camera တပ်ဆင်ထားပါတယ်f/ 1.8 ၏ focal aperture နှင့်အတူ။ ၎င်းတွင်ရှေ့ဘက်တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အာရုံခံကိရိယာများလာမည့် resolution နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
Nova 2S ၏အနောက်ဘက်တွင်ဖန်သားပြင်အဖုံးပါရှိသည် ၎င်းသည်တောက်ပမှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလှပသောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။
Andoid 8.0 Oreo သည် Huawei Nova 2S ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
Nova 2S သည် Google ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်: Android 8.o Oreo ။ ဒါဟာနည်းနည်းမဖြစ်နိုင်ပါ!
ထို့အပြင်၎င်းကို EMUI 8.0 စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်။
Huawei Nova 2S ကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်
ဒီ terminal နှစ်ခုမျိုးကွဲလာလိမ့်မယ်, 32GB သိုလှောင်မှုတစ်ခုနှင့် 64GB နှင့်အတူတ ဦး တည်း။
၎င်းသည်အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ မီးခိုးရောင်နှင့် Turquoise ဟူ၍ အရောင်လေးမျိုးဖြင့်လည်းရောက်ရှိမည်။
သင် Huawei Nova 2S ကိုကြိုက်လား? ဒီစမတ်ဖုန်းကနေဘာမျှော်လင့်ရ ဦး မလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei Nova 2S ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်သည်
သေးငယ်တဲ့အပိုဒ်ငယ်, mate 10 ရဲ့ပရိုဆက်ဆာက 970 မဟုတ်ဘဲ 960 ပါ
Android Oreo အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ